Mayelana Nathi - Hebei Kingflex Insulation Co., Ltd.
I-Kingflex Insulation Co., Ltd. iyinhlanganisela yokukhiqiza nokuhweba esezingeni eliphezulu yemikhiqizo yokushisa okushisayo.Umnyango wokuthuthukiswa kocwaningo lwe-Kingflex utholakala enhlokodolobha eyaziwayo yezinto zokwakha eziluhlaza e-Dacheng, eChina.Kuyibhizinisi elonga amandla emvelo eligxile ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ukukhiqiza nokudayisa.Ngokusebenza, i-Kingflex ithatha ukonga amandla kanye nokunciphisa ukusetshenziswa njengomqondo oyinhloko,.Sihlinzeka ngezixazululo eziphathelene nokufaka izinto ngokusebenzisa ukubonisana, ucwaningo nokukhiqiza ukuthuthukiswa, isiqondiso sokufakwa, kanye nesevisi yangemuva kokuthengisa ukuze sihole ekuthuthukisweni komkhakha wezinto zokwakha zomhlaba wonke.
I-Kingflex isungulwe ngabakwaJinwei Group okuwumlando weminyaka engaphezu kwengama-40.I-Kingway Group yasungulwa ngo-1979. Yayingumkhiqizi wokuqala wezinto ezishisayo zokushisa enyakatho yoMfula i-Yangtze.
Abasebenzi bethu bayamangalisa ngokwazo, kodwa ngokuhlanganyela yibo okwenza i-Kingflex ibe indawo yokusebenza ejabulisayo nezuzisa kangaka.Iqembu le-Kingflex liyiqembu elihlangene, elinekhono elinombono okwabelwana ngawo wokunikeza isevisi yekilasi lokuqala njalo kumakhasimende ethu.I-Kingflex inonjiniyela abayisishiyagalombili eMnyangweni we-R & D, abadayisi abangu-6 bamazwe ngamazwe, abasebenzi abangu-230 Emnyangweni wokukhiqiza.
Amandla ethu Okukhiqiza
Njengamanje, i-Kingflex inemigqa emi-5 emikhulu yokuhlanganisa okuzenzakalelayo, enamandla okukhiqiza minyaka yonke angaphezu kuka-600,000 cubic metres, futhi isiyibhizinisi eliqokiwe lokukhiqiza eliqokwe uMnyango Wezamandla, uMnyango Wezamandla Kagesi kanye Nomnyango Wemboni Yamakhemikhali.
Imikhiqizo ye-Kingflex thermal insulation isetshenziswa kabanzi ekwakhiweni, kuphethiloli, kwamakhemikhali, kwezokuvikela kazwelonke, emkhathini nakwezinye izimboni.Futhi imikhiqizo ye-Kingflex ithunyelwe emazweni angaphandle angaphezu kwamashumi ayisithupha nesithupha emhlabeni jikelele eminyakeni eyi-16 edlule.
Nikeza amakhasimende emhlabeni wonke ngesethi egcwele yesisombululo sesistimu yokonga amandla.
Supply integrated solution provider of the thermal insulation, cold insulation kanye nokunciphisa umsindo wezakhiwo nezimboni.